Waxtarka Caafimaad Ee Qorfaha - Daryeel Magazine
Waxtarka Caafimaad Ee Qorfaha
Qorfuhu waa dhir cunto oo aad u udgoon isla markaana dhadhan fiican leh. Waxaa qorfaha daawo ahaan loo isticmaali jiray mudo kumaan sano ah waa loo aaminsanaa inuu yahay daawo dhaqameed caafimaad badan. Waxaa jirtay waqti qorfuhu ka qaalisaanaa dahabka!.
Sayniska casriga ah ayaa ka markhaati kacay dhaqankaas soo jireenka ah waxaana la xaqiiyay in qorfuhu yahay daawo waxtarka badan
Hadaba waxaynu halkaan kusoo qaadanaya qaar ka mid ah faaidooyinka qorfaha ee ay saynisyahannadu ku ogaadeen cilmi baarista.
Faaidooyin ugu muhiimsan ee qorfaha ayaa la sheegaa inay ku jirto saliida laga miiro geedkaan.
Kontaroolka sonkorta dhiiga:
Qorfuhu wuxuu faaidooyin muhiim ah u leeyahay dadka qaba sonkorta gaar ahaan nooca labaad (Type 2 Diabetes). Waxaa qorfaha ku jirta maadada loo yaqaan “Cinnamaldehyde” oo sonkorta dajisa.
2. Kobcinta Xusuusta:
Qorfaha wuxuu kordhiyaa foojignaanta iyo xasuusta, tanoo lagu arkay daraasad lagu sameeyay dad ku nool wadanka Jarmalka, shaaha ku darso qorfe markaa wax akhrinaysid ama xifdinaysid wuu ku caawin doonaa alle idinkii, wuxuu kaloo wax ka taraa xanuunka xasuusta lumiyo ee loo yaqaano “Alzhieimer’s” tanoo lagu ogaaday illaa 3 cilmibaaris oo lagu sameeyay wadamo kala duwan.
3. Ka Hortagga Cuddurada Wadnaha:
Qorfuhu waxa uu wadnaha ka ilaaliya in waxyeello iyo infakshan ku dhacaan, Cuntada fudud ee dadku inta badan cunaan waxaa ku jira kolesterool iyo dufanka caafimaadka u daran. Qorfuhu wuxuu dagaallamaa kolesteroolka xun, wuxuuna ka hortagaa in xididdada dhiiggu xirmaan, waxaa kale oo uu yareeyaa khatarta wadne xanuunka.
4. Shaqada Xiidmaha:
Qorfaha waxaa ku jira Kalshiyaam iyo fiber oo muhiim u ah shaqada xiidmaha. Fiber waxaa aa uu ka hortagaa kansarka xiidmaha.
Fiber wuxuu si gaar ah uu bogsiiyaa calaamadaha xanuunka malawadka kacsan ee afka qalaad lagu yiraahdo “Irritable Bowel Syndrome” ama IBS waana cudurka ugu badan ee keena xanuunka xiidmaha iyo malawadka, calaamadaha lagu karto waxaa ka mid ah shuban, calool fadhi, calool xanuun, dibiro iyo dhuuso badan.
Qorfaha wuxuu ka mid yahay cuntooyinka ku caan baxay sun-saarista jirka sida shaaha cagaaran oo kale, daraasad lagu sameeyay dalka India waxaa lagu arkay in qorfuhu uu ka hortago sunta fariisato jirka khaasatan xididada.
6. Xanuunka Caadada:
Shaah qorfe leh oo aad cabtaa maalmaha caadadu soo so dhowdahay ama maalinta koobaad waxay yareysaa xanuunka caadada.
7. Yarenta Lafo Xanuunka:
Qorfaha waxuu yareeyaa lurka ama caabuqa “Inflammation”, sidaas awgeed waxay u roon yahay xanuunada lafaha ku dhaca sida roomaatisamka iyo riixa. Haddii aad leedahay xanuun lafaha una badan kalagoysyada oo marmarka qaar ku bararo, fadlan ku subko saliidda qorfaha, waxay awood u leedahay inay maqaarka ka gudubto oo kalagoyska gaarto
8. Wareegga Dhiiga:
Qorfuha waxaa ku jirta maado la yiraahdo “coumarin” oo hagaajisa wareegga dhiiga ee jirka oo dhan.
Waxaa muhiim inaad ogaatid qorfaha oo la isku badiyaa waxay dhaawici kartaa beerka waxayna horseedi kartaa inuu howlgab noqdo!.
Qorfuhu waxaa u ka mid yahay waxyaabaha dabiiciga ee lagula tacaalo hargabka iyo ifilada. Wuxuu yareeyaa cune xanuunka. Waxaad isku darsan kartaa hal ama labo qaado oo qorfe budo ah iyo shaaha cagaaran.
Qufaca iyo ifilada waxaa kaloo lagu daaweeyaa in la cabbo isku-darka biyo dirran, malab iyo qorfe, quraacda kadib iyo habeenkii intaan la seexan ka hor.
10. Caafimaadka afka:
Qorfuhu waxaa uu dilaa jeermiska keena suuska waxaana uu la dagaallamaa caabuqa cirridka iyo huurada, afkana wuu carfiyaa.
Qiimaha Caafimaad Ee Saliida Dhaga Yaraha Iyo Sida La Iskugu Daaweeyo Malabka Iyo Qorfaha Oo La Isku Daraa Waa Dawo Dabiici Ah Oo Lagula Tacaali Karo Xanuuno Badan Waxtarka Huruuda Iyo Xanuunada Ay Dawayso Waxtarka Saliida Qumbaha (Coconut Oil)